Xiisad Dagaal oo ka taagan Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Xiisad Dagaal oo ka taagan Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan
Xiisad Dagaal oo ka taagan Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan
Wararka ka imaanaya Matabaan ayaa sheegaya in halkaa uu kajiro is afgaran waa, kaa oo isku badalay dagaal u dhaxeeyo ciidamada ka wada tirsan Urur diimeedka Ahlu suna wal jamaaca.
Barakac aad u balaaran ayaa ka socdo Degmada Matabaan, kadib markii shalay ay ku dagaalameen laba ciidan, iyada oo qasaaraha ka dhashay dagaalkaas ay ku dhinteen ilaa saddex ruux halka in kabadan shan ay ku dhaawacmeen.
Sida masuuliyiin ka tirsan Ururka Ahlu suna wal jamaaca, ay carabka ku adkeeyeen dagaalka ayaa waxaa sababay kadib markii sarkaal ka tirsanaa Uruka iyo ciidankiisa ay ka baxsadeen maamulki Ururka ahlu suna wal jamaaca, kadibna uu qalalaasa iyo dagaal Sarkaalku ka sameeyay halkaa.
Wararka laga helayo Degmada Matabaan, ayaa waxa ay sheegayaan in Sarkaalka iyo ciidamadiisu ay ku suganyihiin meel aan sidaa uga fugeyn Degmada Matabaan, isla markaana ay ku hubeysan yihiin hubka nuucyadiisa kala duwan.
Sikastaba ha ahaate, majiraan wax waan waan ah oo laga dhex wado labada dhinac ee dagaalku u dhaxeeyo, waxaana dad goob joogayaal ah ay kusoo waramayaan in labada ciidan ay ku howlan yihiin hub aruursi iyo diyaar garow.
Ugu danbey, waxaa jiro cabsi buuxda oo laga qabo in markale uu halkaa dagaal ka qarxo sida ay ku waramayaan dadka deegaanka qaar ka mid ah.
Previous articleDiyaarado nuuca dagaalka ah oo laga leeyahay Dalka Kenya oo duqooyay Jilib Soomaaliya
Next articleGudoomiye ku xigeenki hore ee degmada Xamar Jajab oo u geeriyooday dhaawac Qarax